नेपाली थुक्ने, विदेशी फोहोर टिप्ने ! | Kendrabindu Nepal Online News
30717711 956864 7408090 22352757
२० भाद्र २०७६, शुक्रबार १९:२०
काठमाडौं । काठमाडौं भन्नेबित्तिकै धुलो, धुवाँसँगै फोहोरको शहरका रूपमा चिनिन्छ । अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण काठमाडौंको व्यवस्था एकातिर भताभुंग छ भने अर्कोतिर यत्रतत्र हुने फोहोरले शहरको गरिमा घटाएको छ । धुवाँ, धुलो तथा अव्यवस्थित सडकका कारण काठमाडौंलाई विदेशीले नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेका छन् ।
नेपाल घुम्न आउने अधिकांश विदेशीको एउटै टिप्पणी हुन्छ, काठमाडौंको धुलो, धुवाँ र अव्यवस्थित सडक कहिले राम्रा हुन्छन् ? काठमाडौंको अव्यवस्थाले गर्दा एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको गरिमा घटिरहेको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परिहेको छ ।
त्यस्तै जथाभावी फालिने फोहोर व्यवस्थापन अर्को चुनौती हो । सरकारी निकाय यसलाई नियन्त्रण गर्न लागिपरे पनि उपत्यकाबासीको साथ र सहयोगविना यो असम्भवजस्तै छ ।
गौशाला चोकनजिकै श्री वेङ्कटेश देवस्थान मन्दिर नजिकै रहेको फोहोर टिप्ने एक विदेशी पर्यटक ।
त्यसलाई सम्भव बनाउन एकातिर कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर जनचेतना फैलाउनुपर्ने हुन्छ । उपत्यकावासीले गरेको फोहोर सफा गर्न विदेशी त आउने होइनन् । उनीहरूले त सफा गर्नुको साटो तस्बिर खिचेर आफ्नो देशमा देखाई हाम्रो बेइज्जत पो गर्ने हुन् । यस्तो तपाई हाम्रो सोच र उनीहरूमध्ये अधिकांशले गरिरहेको यस्तै हो । तर यो कुरा सबै विदेशीमा लागू हुन सक्दैन भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण बाहिरिएको छ ।
काठमाडौंको गौशाला चोकनजिकै श्री वेङ्कटेश देवस्थान मन्दिर नजिकै फोहोरको थुप्रो थियो । त्यहाँ पानपराग खाएर त्यसका खोल फालिएका थिए । प्लाष्टिक, पेय पदार्थ खाएर फालिएका बट्टाहरू यत्रतत्र छरिएका थिए । ती फोहोरहरू एकजना विदेशीले टिपिरहेका थिए । ती विदेशी फोहोर टिपिरहेकै बेला अर्का एकजना भने पराग खाएर थुकिरहेका थिए । तर ती विदेशीले उनलाई केही जवाफ फर्काएनन् । बरु उनलाई मुस्कान दिएर पठाए ।
फोहोर देखेर ती विदेशीको मन थामिएन । उनले फोहोर टिपेर एकैछिनमा सफा गरिदिए । उनले फोहोर टिपिरहेको दृश्य हेरिरहेका कुनै पनि नेपाली उनलाई साथ दिन आएनन् । ती विदेशीबाट हामीले पनि केही सिक्ने कि !
गौशाला चोक नजिकै खाजा खाएर श्री वेङ्कटेश देबस्थान मन्दिर हुदै गल्लिबाट भित्र पस्दै थिए। त्यहा एकजना बिदेशी मान्छे मन्दिर अगाडी परागका खोल, फ्रुटिका डब्बा, प्लास्टिक, फोहोरहरु टिपिरहेका रहेछन। उहा त्यही फोहोर टिप्दै हुनुहुन्थ्यो तर केहि मानिस पराग खाएर त्यतै फर्केर थुकिरहेका थिए?। यो कुनै नौलो कुरा होइन बिडम्बना उनको आखाबाट आशु झरिरहेको थियो। उहा केहि बोल्दै पनि हुनुहुन्थ्यो मैले बुझ्न सकिन। एउटा बिदेशीलाई त्यतिसम्म फोहोर हुदा टेन्सन हुन्छ भने हामी नेपालीलाई भने केहि फरक पर्दैन बरु अझै त्यतै फर्केर थुकिदिन्छौ?आफुले गर्न नसकेपनि अरुले गरेको कामको प्रोत्साहन गरौ, सहयोग गरौ आफैबाट सोच बदलौ?
Posted by Anmol Karki on Friday, September 6, 2019
kathmandu, काठमाडौँ, धुलो, धुवाँ, फोहोर, फोहोर व्यवस्थापन
Prevभोलि हुने MBBS प्रवेश परीक्षा रोक्न सर्वोच्चको आदेश
के तपाईले मकैको मःम, चटपटे, खिर खानु भएको छ ? (हेर्नुहोस भिडियोमा)Next
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने मजदूर पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा